HD Guard နဲ့ Deep Freeze — MYSTERY ZILLION
HD Guard နဲ့ Deep Freeze
June 2009 edited October 2009 in Help Desk
HD Guard နဲ့ Deep Freeze ဘယ်ဟာက ပိုကောင်းလဲဟင်..။ :106:
ကျွန်တော်ကတော့ ခု လောလောဆယ် Deep Freeze သုံးထားတယ်.. HD Guard သုံးမလားလို့ပါ..။
ဒါကြောင့် HD Guard ကောင်း..မကောင်း ပြောပြပေးပါဦးနော်ဗျ..။:)
ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်တော်လဲသိခြင်ပါတယ် HD Guard ကို ဘယ်လို သုံးလဲဆိုတာကို ပါ ရှင်းပြပေကြပါ:65:
ကျနော်လည်း...DeepFreeze သုံးတာနဲ့ပဲအိုကေနေတာဆိုတော့....HD Guard ကိုတော့ မစမ်းဘူးသေးဘူး..
HD Guard ကိုလေ့လာနေဆဲပါ။ သုံးဖူးသူတွေအပြောကတော့ ခုထိ ဗိုင်းရပ်မထိဖူးသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ Deep Freeze ကတော့ ဗိုင်းရပ်ထိတာ ကြုံဖူးပါတယ်။
ကိုယ်တွေ့ပါ။ မျက်စိရှေ့တင် kesper က မနိုင်လို့ restart လုပ်ပစ်တာ မြင်ဖူးပါတယ်။
Deep Freeze ကို ကျော်၀င်တဲ့ဗိုင်းရပ်ရှိနေပြီလို့ပဲ ယူဆရမှာပါ။ version ကွာလို့လဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သေချာတော့ မစမ်းကြည့်ရသေးပါဘူး။ အဲဒီစက်ကို ဖြစ်ဖြစ်ချင်း
window ပြန်တင်ပစ်လိုက်လို့ပါ။ အဲဒီဗိုင်းရပ်မိနေတယ်ဆို အဲဒီကောင်လေးကို CD နဲ့ဖြစ်ဖြစ် သိမ်းပေးထားကြပါနော်။
HD Guard သုံးပါတယ်..သူလည်း..မဆိုးပါဘူး..ကောင်းပါတယ်..
၀ါလာရင်တော့.. restart ချပေးလိုက်ပါ..
အင်တာနက်ဆိုင်တွေမှာအသုံးများတာ က defreze ထင်တယ်နော် ဆိုင်တိုင်လိုလိုမှာ defreeze တင်ထားတာတွေတယ် ကျွန် တော်hd guard ကိုဘယ််သုံးလဲ software လေရှိရင်တင်ပေးကြပါလာ ခင်ဗျာ။နောက်ပြီးတော defreeze နဲ hd guard အာသာချက်အာနည်ချက်လေတွေကိုပါရှင်းပြပေပါလာခင်ဗျာ။:((:65::101:
ကျနော်ကတော့ DeepFreeze ပိုကြိုက်တယ်ဗျာ ... HD Guard က သုံးတာများလာရင် နီလာပြီး restart ကျသွားတတ်တယ်။ DF မှာ တစ်ခါတစ်လေ explorer hang သွားတတ်တယ် ... အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင် ... Task Manager ခေါ်ပြီး explorer.exe ကို End Task လုပ်လိုက်ဗျာ ... ပြီးတော့ File အောက်က New Task ခေါ်ပြီး explorer.exe လို့ ရိုက်ထည့်ပြီး enter ခေါက်လိုက် ... အဲ့ဒါဆို ok ပြီဗျာ ....
HD Guard softwareလေးရှိရင်တင်ပေးပါလာအစ်ကို:P:P:P
HDGuard setting မှာ swap File အတွက် Size ကိုချိန်ပေးရပါတယ် ...
Swap File Size ကို များများ ထားပေးလိုက်ရင် အစဉ်ပြေပါတယ်
Deafault အတိုင်း ထားရင်တော့ swap file အတွက် နေရာနည်း ပြီး Computer က လေးလာပြီး
ဟမ်းသွားပါတယ်...ကျွှန်တော် ကတော့ swap file size ကို Protect လုပ်မဲ့ Drive ရဲ့ တဝက်လောက်ကို ပေးထားတော့ အစဉ်ပြေပါတယ်..
ီDeep Freeze တော့မသုံးဖူးပါ ခင်ဗျာ...
ံီုုုHdguard သုံး ထားသောသူများ Virus ကိုက်တယ်် လို့ ပြောသံ မကြားရသလောက်ပါပဲ ..
ံHDguard သုံးတဲ့ သူများ သတိထား စရာရှိပါတယ် ..
ှံGuard ကို Deactivate လုပ်မယ်ဆို ရင် Network Cable ကို ဖြုတ်ထားသင့်ပါတယ်.
Deactivate လုပ်ထားတဲ့ အချိန်မှာ network ကနေ တဆင့် Virus ဝင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ...
ံHDguard Software ဟာ Internet,Game ဆိုင်တွေ အတွက် အလွန်အဖိုးတန် သော
မှားတာရှိရင် ခွင့်လွှတ်ကြပါ ဂျာ...:D
Deep Freeze မှာက Network ကနေပြီးတော့ Workstation တွေကို Control လုပ်လို့ရတဲ့ Feature ပါတယ်။
Server Console ကနေပြီးတော့ Enable/Disable (Freeze/Unfreeze) လုပ်လို့ရတယ်။
လူအရမ်းသက်သာတယ်။ စက်တစ်လုံးထဲကနေ အားလုံးကို Control လုပ်နေရုံပဲ။ :65:
တစ်ခြား Features လေးတွေရှိသေးတယ်ဗျာ။
Deep Freeze ပိုကြိုက်ပါတယ်။ :67:
ဖြစ်ပုံကဒီလိုဗျ .. ဆိုင်က စက်တစ်လုံးမှာ deep freeze တင်ပြီး .. မေ့ပြီးတော့ password မပေးဖြစ်လိုက်ဘူး.. ဖြစ်ချင်တော့ လာသုံးတဲ့ user က pw ပေးသွားတယ်လေ .. သွားပြီ.. ဘယ်လို recover လုပ်ရမလဲ ကူညီကြပါဦးဗျာ..:((:((
Bro သုံးထားတာ Deep Freeze က ဘာ Version လဲမသိဘူး။
Standard Edition ဆိုရင်မျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ဘူးခင်ဗျ။ :106:
Enterprise Edition ဆိုရင်တော့ Bro, Workstation Installer တွေ လုပ်တုန်းက သုံးတဲ့ Administrator Console နဲ့ One Time Password (OTP Token) Regenerate လုပ်ပြီးပြန်ဖြေရင်တော့ရပါတယ်။
hdguard ကို swap file size တင်သုံးပါ။ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ကြောင်တာညိတာမရှိပါဘူး။
သွားပြီထင်တယ်.. ဟီ.. Standard Edition 6.30 ဖြစ်နေတယ်.. format ချမှရတော့မယ်ထင်တယ်နော်.. တခြားတူတွေ တိရင်ပြောပေးကြပါဂျ ... ကျေးဇူးမမေ့ပါဝူး..
အတော်ပဲကျွန်တော် လိုခြင်းနေတာနဲ ကျေးဇူးပဲနော်:p
သယ်ချင်းရေ ကျနော်လဲ Deep Freeze ကိုသုံးနေတယ် control မလုပ်တတ်ဘူး ပြောပြပေးပါလား
:5: ကျွန်တော်ကတော. HD Guard ကိုပဲသုံးဖြစ်တယ် Virus ကတော.တစ်ကောင်မှ ကိုကျန်မနေ
ဖူးတာ အရှင်းပဲ တခါတလေ အလုပ်လုပ်ရတာ များလို. ၀ါသွားတယ် နီသွားတယ် ဆိုရင်လည်း
swap file size ကိုတိုးပေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေပါတယ် Deep Freeze ကတော. သုံးဖူးသူတွေ
ပြောကြတာ တခါတလေဖောက်ချင်တယ်တဲ. အခု Enterprise Edition က Server ကနေ
အားလုံးကို Control လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော. စမ်းသုံးကြည်.မလားလို. လောလောဆယ်တော.
HD Guard နဲ.ပဲ အဆင်ပြေနေပါတယ်:39:
PDF နှင့်တကွ Deep Freeze Enterprise Edition Version 6.30 ပါ။
Down Here :67:
ကျွန်တော်ကို တစ်ခြာsize က နေပြန်တင်ပေပါလာ rapidshare ကနေအဆင်မပြောလိုပါ:2:
4shared ကနေပြန်ဒေါင်းလိုက်ပါ .. အဆင်ပြေပါစေဗျာ ... :67:
:5:ကျေးဇူးပါ အကို ဒါပေမယ်. ဒေါင်းလို.တော.မရသေးဘူး ကျွန်တော်.ဆီက ကော်နက်ရှင်က သိပ်မ
deepfreeze ကို နဲ ့ဖြုတ်တဲ့ software လေးတင်ပေးပါခင်ဗျ ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းအတွက်ပါ သူက unfreezer သုံးလိုမရဘူးပြောလို ့ပါ နောက်ပြိး HD Guard ကြတော့ရောဒီတိုင်းဖြုတ်ရုံပဲလား သူမှာရောဖြုတ်တဲ့ဟာသက်သက်မရှိဘူးလားမသိ
deepunfreezer 1.7 (or) 1.6 သုံးလို ့ရပါတယ်... လိုချင်ရင်တော့iFile.it မှာတင်ပေးပါ့မယ်
လိုချင်တဲ ့သူရှိရင်ပြောပါ တင်ပေးပါ့မယ်...
deepfreeze user guide ပါ
DF က Uninstall လုပ်ရတာ ခက်သလားလို...။
ဘယ်လို ့Uninstall ပြန်လုပ်ရလဲ....။
ိDeep Freeze ကို Deep Freeze နဲUninstall လုပ်လိုရတယ်လေ
သူ့စက်မှာ deepfreeze version 6.30.050.1818 ပါ....................
OTP TOKEN နဲ့လည်းစမ်းကြည့်တာမရပါ...................................
HD guard ကတော့ကျွန်တော်သုံးနေတာပေါ့ Deepfreeze ကအရင်တုန်းက သုံးတာ နှစ်ခုလုံး
သုံးရတာအဆင်ပြေပါတယ် HD guard ကသုံးတာကြာလာရင် ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဗျာ ကျွန်တော်သုံး
နေတာပါ Deepfreeze ကတစ်ခါတစ်ခါကြောင်တယ်ဗျ အကို က HD guard နဲ ့အဆင်ပြေ၇င်
HD guard သုံးပေါ့ Deepfreeze အဆင်ပြေရင် Deepfreeze ကိုသုံးပေါ့ဗျ
DeepFreeze က ပို်ကောင်းတယ်
English version လေများမရနိုင်ဘူးလား
ိdefreeze ကို တစ်လုံးကဖြုတ်လိုက်ရင်
ဟုတ်တယ်ဆိုရင် ဘားရှင်းက ဘယ်လောက်လဲခင်ဗျာ
Deep Freeze v6.53.020.2763 Enterprise | 49 MB
Faronics Deep Freeze Server enables IT administrators to protectaWindows 2000/2003/2008 Server's operating system and software without restricting server functionality. With every server restart, Deep Freeze Server resets the system to its original stateвЂ”right down to the last byte. IT administrators are able to reduce the number of tedious tech support calls that arise from server software misconfiguration, configuration drift, and corruption. Deep Freeze Server is ideal for IT environments where server changes do not need to be saved or where data is redirected toaThawed drive.
deepfreeze ကိုအရင်က ကျွန်တော့် ဆိုင်မှာတင်ပါတယ်
ဒါပေမယ့် ခက်တာက ups မနိုင်လို့ စက်ကပိတ်သွားရင် member time မနှတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်
သဘောက member က နာရီအကုန် use သွားလို့ကုန်သွားလဲ restart ချလိုက်ရင် အဲဒီ member time ကိုမနှတ်ဘူး ခက်တယ်
ဒါကြောင့် member & user တွေက restart ချလိုက်ရင် ဒါမမဟုတ် ups မနှိင်လို့ စက်ကျသွားရင် cafezee က used time မနှတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်
ိdeepfreezee က always new log ဖြစ်နေတယ် record လုပ်လို့မရဘူး
eminux wrote: »
Deepfreeze ရော Deepfreeze ပုံစံ Memstick နဲ့တွဲသုံးရတဲ့ IceBox သုံးဖူးပာတယ်(သူက stick စိုက်မှ freeze/unfreeze manage လုပ်လို့ရတယ်။ ဈေးကလည်း မြန်မာငွေ ၁၅၀၀၀ လောက်ပဲကျမယ်)။ သူမှာတော့ WMP လို Messenger လို အသုံးများတ ဲ့software တွေရယ် My document နဲ့ တစ်ခြားကိ်ုပေးချင်တဲ့ Folder တွေကို သီးခြား Pass ပေးရတယ်။ သီးခြား space တော့ ပိုသတ်မှတ်ပေးရတယ် 2G လောက်နဲ့။ Deepfreeze တော့ pass လုပ်ဖို့ Manage မပာဘူး။
ဒာကိုFaronics က Data Igloo နဲ့ဖြေရှင်းထားပေးပာတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း paid ပော့လေ။ သူက freeze partition ထဲက folder ကို thawed partition ထဲ redirect လုပ်ပေးပာတယ်။ application data folder ကို thawed partition ထဲချိတ်လိုက်ရင် application အများစုက ပုံမှန်လိုပဲ အလုပ်လုပ်နိုင်ပာတယ်။ လောလောဆယ် Data Igloo crack ကိုတော့ရှာမတွေဘူးဗျာ။ :2:
အဲဒီထက်လွယ်ပြီး အလကားရတာက microsoft junction ပာ။ cmd ကသုံးရမှာ size က 41kb ပဲရှိတယ်။ Technet မှာ အညွန်းနဲ့ file ကို down နိုင်ပာတယ်။
သူ့ကို Install လုပ်ခဲ့တဲ့ setup.exe ကိုပဲပြန်ရမ်းပေးလိုက် အကို ပြီးရင် Uninstall ပေါ့:5::5:
ကျေးဇူးပါ အကို အဲဒီ့Data Igloo crack ရရင်တော့ deepfreeze အတွက်အစဉ်ပြေမယ်ထင်တယ်
junctionလဲ download ဆွဲထားပါတယ် cmd type တွေကို အဲဒီ web site မှာပြထားတာတွေ့ရတယ်
deepfreeze က password မေ့သွားရင်မလွယ်ပါဘူး နောက်ပြီး virus က deepfreeze ကိုကျော်ပြီး hard disk ထဲက partation အထိ ကိုက်သွားရင် boot တက်ဖို့ခက်ပါတယ် window ပြန်တင်နိုင်အောင် အတော်လုပ်ယူရပါတယ်
Diskfreeze Install လုပ်တာ Error #2 လို့ပြပြီး ၇ပ်သွားပါတယ်...
XP park ၃ ပါ